ဟွာဝေး Mate 9: သင်အမှန်တကယ်တစ် 5.9in phablet Want ပါနဲ့? - သတင်း Rule
ဟွာဝေး Mate 9: သင်အမှန်တကယ်တစ် 5.9in phablet Want ပါနဲ့?
အကြီးစား-ပြစမတ်ဖုန်း Samsung ရဲ့ပေါက်ကွဲမှတ်ချက်ခြင်းဖြင့်ကျန်ရစ်ကွာဟချက်ကိုဖြည့်ဖို့မျှော်လင့်7နှင့်တစ်ဦးပရီမီယံဟန်းဆက်ထုတ်လုပ်သူအဖြစ် Huawei ကခိုင်မာအောင်
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “ဟွာဝေး Mate 9: သင်အမှန်တကယ်တစ် 5.9in Phablet ကိုလိုခငျြဘူး?” ရှမွေလသည် Gibbs ကရေးသားခဲ့, theguardian.com ကြာသပတေးနေ့ 3rd နိုဝင်ဘာလအပေါ်များအတွက် 2016 13.30 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
Huawei ၏အသစ်စမတ်ဖုန်းအကြီးအကျယ် 5.9in screen ကိုရှိပါတယ်. ဒါပေမယ့်သင်အမှန်တကယ်သင့်ရဲ့ smartphone ကိုဖြစ်ချင်ပါဘူးကိုယ့်ကိုဘယ်လိုကြီးမားတဲ့?
phablet - 5.5in ကျော်မျက်နှာပြင်အရွယ်အစားနှင့်အတူစမတ်ဖုန်း - ပို. ပို. လူကြိုက်များဖြစ်လာကြပါပြီ, အမေရိကန်နှင့်ဥရောပသူတို့ရဲ့အာရှဇစ်မြစ်ကနေလမ်းကြောင်းသစ်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှုဖြင့်. တောင်မှ Apple က, သေးငယ်တဲ့စမတ်ဖုန်းများအတွက်ကျော်ကြားသော, တစ်ဦး Phablet ကိုစတင် 2014 အိုင်ဖုန်းနှင့်အတူ6နောက်ထပ်. သို့သော်အနည်းငယ် phablet 5.7in ကျော်လွန်သူတို့ရဲ့ဖန်သားပြင်ကိုဆန့်.
အသစ်€ 699 (£ 621) ဟွာဝေး Mate9တစ်ဦး 5.9in ကို full HD display ကိုရှိပါတယ်, နောက်ကျောအပေါ်ကို dual ကင်မရာများ, 7.9mm ကိုယ်ထည်အထူနှင့်၎င်း၏စိတ်ကြိုက် Android ရဲ့ကုမ္ပဏီ၏နောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းပြေး 7.0 Emotion UI ကိုခေါ်တော် Nougat 5. ဒါဟာအစ Huawei ၏နောက်ဆုံးပေါ် processor ကိုရှိပါတယ်, သောကုမ္ပဏီဆိုသည် 20% Apple ကထက် Multi-core ကိုစစ်ဆင်ရေးအတွက်၎င်း၏ယခင်မျိုးဆက်ထက်ပိုမိုအစွမ်းထက်နှင့်ပိုပြီးအစွမ်းထက်, Samsung ကသို့မဟုတ် Qualcomm ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ်ပရိုဆက်ဆာ.
သို့သော်ထိုမေးခွန်းအမေရိကန်နှင့်ဥရောပ၌ဝယ်လက်ထိုကဲ့သို့သောကြီးမားမျက်နှာပြင်ချင်ရှိမရှိနေဆဲ. ထိုအိမ်ထောင်ဖက်လိုင်း၏ယခင်ကြားမှာစတိုးဆိုင်များတွင် Mass en ကိုရောင်းရကြပြီမဟုတ်, ထိုအိမ်ထောင်ဖက်အဓိပ်ပာယျ9တရားဝင်ဗြိတိန်၌ထုတ်လှိမ့်ဖို့ Huawei ၏စူပါအရွယ် phablet ၏ပထမဦးဆုံးဖြစ်ပါတယ်.
အိမ်ထောင်ဖက်9Huawei ၏၏နောက်လာမည့်ကြားမှာနောက်ကျောအပေါ် Leica ကို dual camera ကိုနှင့်အတူပူးတွဲအင်ဂျင်နီယာသိရသည်. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
နှင့် Samsung ရဲ့ Note ကို၏ပျက်ကွက် 7, အ Phablet ကိုအမျိုးအစားအတွက်ကြီးမားတဲ့ရောင်းချသူဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ခဲ့သည့်, Huawei နှင့်အခြားသူများကွာဟချက်ကိုဖြည့်ဖို့အခွင့်အလမ်းများ. အခြားသူများ Phablet ကိုစကေး၏သေးငယ်တဲ့အဆုံးအာရုံစိုက်ခဲ့ကြစဉ်တွင်, အတူ တစ်ဦး 5.5in screen ကိုဘဲ Google ရဲ့ Pixel XL, Huawei ကဆင်းရဲသားကိုဘက်ထရီသက်တမ်းကိုဖြေရှင်းရန်ကြိုးစားခဲ့နှင့်အချိန်နှင့်အမျှဖုန်းဆင်းနှေးကွေးခဲ့သည်.
ကလုပ်ဖို့, ထိုအိမ်ထောင်ဖက်9500mAh အကြောင်းကိုအများဆုံးခေတ်ရေစီးကြောင်း phablet ထက်ပိုကြီးရဲ့ကြီးမားတဲ့ 4,000mAh ဘက်ထရီရှိပါတယ်, အ Pixel XL အပါအဝင်, တစ်ဦးသင်ယူမှု-based system ကိုနှင့်အတူ, သောဖုန်းပေါ်မှာပြည်တွင်းဖြစ်ပြေးနှင့်အသုံးပြုမှုပုံစံများကို detect, ပုံမှန်အားဖြင့်ဘက်ထရီသက်တမ်းသို့မဟုတ် performance ကိုထိခိုက်ခြင်းမရှိဘဲပိုမိုမြန်ဆန်ဖွင့်ဖို့နေ့ကိုအချို့အချိန်များတွင်အသုံးပြုကြသည် apps များပြင်ဆင်နေ.
စနစ်လည်းနေ့ချင်းညချင်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ကို run နိုင်ပါလိမ့်မည်သည့် Huawei ဆို, အ cruft ထုတ်ရှင်းလင်းနှင့်လိုင်းဆင်းအသစ်နှစ်နှစ်ကဲ့သို့ပြေးဖုန်းကိုစောင့်ရှောက်. ကုမ္ပဏီ၏ဆော့ဖ်ဝဲယခင်ဗားရှင်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်, က run ဖို့မျှော်လင့်ထား 80% တစ်နှစ်ကိုပြီးနောက်ပိုမြန်.
Huawei ၏အသစ် Emotion UI ကို5စံ Android ရဲ့အမြင်အာရုံစိတ်ကြိုက်ချတန်ချိန်, ကုမ္ပဏီအအနောက်ပိုင်းဝယ်လက်ဖို့ပိုအယူခံလိမ့်မည်မျှော်လင့်သော. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
အဆိုပါအိမ်ထောင်ဖက်9ရဲ့ကြီးမားတဲ့ဘက်ထရီလည်း Huawei ၏အသစ်အစာရှောင်-အားသွင်းစနစ်အားရှိပါတယ်, OnePlus ရဲ့ Dash တာဝန်ခံတူရာ, လုံခြုံစွာ charger ကိုသို့မြင့်မားဗို့အားမှာဘက်ထရီအားသွင်းဖို့မလိုအပ်အီလက်ထရွန်းနစ်အချို့ကိုလှုံ့ဆျော. အဆိုပါကုမ္ပဏီအသစ်တာဝန်ခံမှုစနစ်ရောက်ရှိနိုင်လိမ့်မည်ဟုဆို 58% အတွက်ဘက်ထရီစွမ်းရည် 30 မိနစ်, အတွက်အပြည့်အဝတာဝန်ခံနှင့်အတူ 90 မိနစ်.
"ဘက်ထရီစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာသုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးအိမျတျော၌ဖျော်ဖြေနေသည်, ကျွန်တော်သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလာကြသည်င့်ပေးထားမကြာသေးမီကဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုခြောအလားတူဘာမှမဖွစျနိုငျပါစေဖြုန်း. ကျနော်တို့ရောင်းချခြင်းအပေါ်မသွားခင်နှစ်ဦးစလုံးပြည်တွင်းနှင့်ပြင်ပမှထိုကဲ့သို့သောဘက်ထရီအဖြစ်တစ်နှစ်လျှင်ခြေစစ်ပွဲနှင့်စမ်းသပ်ခြင်းအစိတ်အပိုင်းများကိုဖြုန်း,"Ed က Gemmell ကပြောပါတယ်, ဆက်သွယ်ရေး Huawei ၏စားသုံးသူစီးပွားရေးအုပ်စုညွှန်ကြားရေးမှူး.
တက်ဘလက်ရောင်းအား, PC ကွန်ပျူတာရောင်းအားနှင့်အတူ, ကျဉ်းမြောင်းကြသည်, ပိုပြီးလူတို့သည်မိမိတို့မူလတန်းကွန်ပျူတာ device ကိုအဖြစ်၎င်းတို့၏စမတ်ဖုန်းကိုသုံးအဖြစ်. သို့သော်ဥရောပနှင့်အမေရိကန်စားသုံးသူတွေထိုကဲ့သို့သောကြီးမားသည့်စမတ်ဖုန်းမှယူလိမ့်မည်ရှိမရှိထင်ရှားစေခြင်းငှါဖြစ်နေဆဲ.
တစ်ကန့်သတ်ထုတ်ဝေ Mate9Porsche ဒီဇိုင်းမူကွဲ, သေးငယ်တဲ့ 5.5in ပြုလုပ်ထားတဲ့ Quad နှင့်အတူ HD ကိုကွေးမျက်နှာပြင်နှင့်အလားတူသတ်မှတ်ချက်များလည်း€ 1,395 ကုန်ကျဗြိတိန်နှင့်အီးယူအတွက်ရရှိနိုင်ဖြစ်လိမ့်မည် (£ 1,238), ဒါပေမဲ့မအမေရိကန်နိုင်ငံတွင်.
ညာဘက်ကို Google Pixel XL နှင့်အတူတစ်ဦးက side-by-side အရွယ်အစားနှိုင်းယှဉ်လျှင်, အသစ် Huawei ကအိမ်ထောင်ဖက်9ဘယ်ဘက်မှာ. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
39880	3 Android မှာ, အပိုဒ်, ဟွာဝေး, မိုဘိုင်းဖုန်းများ, သတင်း, phablet, ရှမွေလသည် Gibbs, စမတ်ဖုန်း, နည်းပညာ, ဗြိတိန်နိုင်ငံနည်းပညာ
← Google က Pixel ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း အမေဇုံ: Echo: ပထမဆုံး 13 ကြိုးစားပါမှအမှုအရာ →